१० उपायहरु जसले तनावमुक्त गर्नलाई मदत गर्दछ - Sakaratmak Soch
१० उपायहरु जसले तनावमुक्त गर्नलाई मदत गर्दछ
मानिसहरुले आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागी धेरै सपनाहरु देखेका हुन्छन् । उनीहरु जीवनमा केहि कुरा हाशिल पनि गर्न चाहन्छन तर ति कुराहरु पाउन अथवा सफलता प्राप्त गर्न त्यति सजिलो पनि हुदैन । त्यसको लागी धेरै परिस्थितिहरुको सामना गर्दै अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । जीवनमा अघि बढ्ने क्रममा साना ठुला समस्याहरुको सामना गर्दै जादा दिमागमा पनि अनेक कुराहरु खेल्ने गर्छन ।
यसले गर्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ख्यालमा राखेर अघि बढ्नु पर्दछ । यदि मनमा धरै कुराहरु खेलिरहेका छन् भने आफ्नो मन मिल्दो साथीभाईहरु सग त्यो कुरा शेयर गर्ने गर्नुहोस् । यसले गर्दा तपाईको मन हल्का हुन्छ । आजकल मानिसहरु धेरै तनावमा रहने गर्दछन । आफ्नो घर परिवारलाई लिएर तनावमा हुन्छन भने कतिपय आफ्नो करियरलाई लिएर तनावमा रहेका हुन्छन । त्यसैले आज हामी यस्ता कुराहरुलाई मध्य नजर गर्दै यस्ता समस्याहरुबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने बारे चर्चा गर्न गईरहेका छौ । तनावमा रहिरहनु भनेको एकदमै गम्भीर समस्या हो त्यसैले हामीले यसलाई सामान्य रुपमा लिनी हुदैन । किनकि तनावमा रहेका कारण मानिसहरुबाट अप्रिय घटनाहरु पनि घट्ने गर्दछ ।
यदि तपाइको दिमागमा एकै चोटी धेरै कुराहरु आइरहेका छन् भने ति कुराहरुलाई आफ्नो निजि डायरीमा टिपोट गर्नुहोस् । ति कुराहरुलाई दिमागमै राखिरहनु भयो भने तपाइको दिमागलाई निकै प्रेसर पर्छ त्यसैले दिमागमा जे जति कुराहरु आए पनि त्यसलाई टिपोट गरिहाल्नुहोस । यसरी दिमागमा आएको कुराहरुलाइ टिपोट गर्ने बानीले दिमागी सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुग्दछ । यदि तपाईको लेख्ने बानी छैन भने एकपटक लेखेर हेर्नुहोस् तपाईको मन हल्का हुनेछ । र तपाई विकल्प र बिचारको पनि राम्रो सग बिश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ । नकारात्मक्क होस् वा सकारात्मक कुरा त्यसलाई टिपोट गरिहाल्नु र ति मध्ये कुन कुराले तपाईलाई फाईदा पुर्याउछ र कुन कुराले बेफाइदा त्यसको बारेमा बिचार गर्नुहोस् ।
२. आफ्नो लागी ठाउ बनाउनुहोस्
मानिसहरुको कस्तो बानी हुन्छ भने उनीहरु आफ्नो बारेमा भन्दा बढी अरुको बारेमा सोचेर तनावमा आउने गर्दछन । त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा आफुलाई महत्व दिनुहोस । आफुले गर्ने कामहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्नुहोस् । जतिबेला पनि काम मात्र भनेर नबस्नुहोस । मनोरंजनका लागी पनि समय निकाल्नुहोस । हप्तामा एक पल्ट साथीभाईहरु संग वा आफ्नो परिवार संग कतै रमाइलो ठाउमा घुम्न जाने गर्नुहोस् । बिभिन्न चाडपर्वहरुमा मन खोलेर रमाउने गर्नुहोस् । हरेक कुरालाई सकारात्मक तरिकाले हेर्ने गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईमा एउटा सकारात्मक उर्जा आउछ र नकारात्मक बिचारहरुले तपाईमा ठाउ पनि पाउदैनन ।
सबैभन्दा सुरुमा तपाइले गर्ने काम र तपाईको जीवनको महत्वपूर्ण कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् । किनकि आफ्नो जीवन आफैले बनाउने हो त्यसैले प्राथमिकताहरु छुट्याउन एकदमै जरुरी हुन्छ । तपाईको लागी महत्वपूर्ण के छ त्यसमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्नुहोस् । अरुले आफ्नो बारेमा के भन्छन भनेर नसोच्नुहोस । यसले गर्दा तपाइँसंग अनावश्यक कुराहरुको लागी समय पनि हुदैन र तपाईको इज्जत पनि बढ्दै जान्छ । यसरी आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्दै जानुभयो भने करियरमा सफल पनि बन्नुहुनेछ । त्यसपछि तपाईको दिमागबाट अनावश्यक कुराहरु पनि घट्दै जान्छ र तपाईको समाजमा पनि एउटा राम्रो छाप बस्ने छ ।
जीवनमा सधै सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरुको मात्र संगत गर्नुहोस् । उच्च बिचार भएका व्यक्तिहरु संग सम्बन्ध बिस्तार गर्दै जानुभयो भने तपाईको काम गर्ने क्षेत्रमा पनि सहयोग पुग्नेछ । आफ्नो काम र व्यक्तिगत जीवनलाई एकै ठाउमा मिलाएर नबस्नुहोस । व्यक्तिगत जीवनलाई बेग्लै र खुसि भएर बाच्नुहोस । आफ्नो पेशागत मर्यादा र जीवनलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो सिमितता बनाउदै जानुहोस । यसले गर्दा तपाइँ बिना कुनै अलमल अगाडी बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईको दिमागमा अनावश्यक कुराहरु पनि आउदैनन ।
जति धेरै कम गर्यो त्यति बढी दिमागबाट नकारात्मक कुराहरु पनि हट्दै जान्छ । जो मान्छे केहि काम नगरी बस्छ उसको दिमागमा अनेकौ कुराहरु खेल्न थाल्दछ र उसको दिमागी सन्तुलन पनि बिग्रन सक्दछ । त्यसैले काम नगरी बसेर आफ्नो दिमागमा नराम्रो कुराहरुलाई डेरा बसौं नदिनुहोस् । आफुले आफुलाई ब्यस्त राख्नुहोस् । एकैपटकमा धेरै काम गर्न नखोज्नुहोस । पलाई पालो काम गर्ने गर्नुहोस् । एकैपटक धेरै काम गर्ने भनेर सोच्न थाल्नु भयो भने तनाव मात्र बढ्छ त्यसैले हरेक काम पालै पालो गर्ने गर्नुहोस् । धेरै काम गर्दा तपाईको समय ब्यबस्थापन पनि मिल्दैन र तपाइँको ध्यान नै अलमल पर्छ । त्यसैले आफुलाई कुन काम गर्दा खुसि मिल्छ त्यो काम गर्नुहोस् ।
आफु बस्ने ठाउ र आफुले काम गर्ने ठाउ सफा र सुन्दर राख्नुहोस् । बिभिन्न सभा तथा सेमिनारहरुमा सहभागी हुने गर्नुहोस् । यसले तपाइ नयाँ कुराहरु सिक्न पाउने हुनेछ । नयाँ साथीहरु बनाउन पाउने मौका पनि पाउनेहुनेछ । नयाँ कुरा सिक्ने तालिमहरु खुलेको ठाउमा सहभागी हुन जानुहोस । नबुझेको कुरा सोध्ने गर्नुहोस् । आफुलाई आर भन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्नुहोस् । नयाँ – नयाँ कुराहरुसंग अपडेट रहनुहोस् । तपाईमा जति धेरै कुराहरुको जानकारी हुन्छ त्यति बढी तपाईमा राम्रा कुराहरु आउन थाल्नेछन । पुस्तकहरु खोजि खोजि पढ्ने गर्नुहोस् । यस्ता कामहरु गरिरहदा तपाइँ संग अनावश्यक कुराहरु सोचेर बस्ने फुर्सद पनि हुदैन र तपाइँ एक सकारात्मक बिचार लिएर अगाडी बढ्न सक्नुहुनेछ ।
हरेक रात सधै एउटै कुराले सताई रहन्छ भोलीको दिनमा म केही गर्न सकुला कि नसकुला – प्रेरक भनाईहरु
साथी धेरै छन भनेर घमण्ड नगर्नुस अगाडी ठिक्क पारेर पछाडी छुरा घोपने जमाना छ – मनछुने लाईनहरु
किन कसैले कसैको डाहा गर्छन् ? डाहा गर्दा डाहा गर्नेलाई र गरिनेलाई के हुन्छ ?
सम्बन्ध बनावटी पो छ कि ? यसरी थाहा पाउन सकिने रहेछ